सर्लाहीमा दुर्घटना, ३ जनाकाे मृत्यु - Muldhar Post
सर्लाहीमा दुर्घटना, ३ जनाकाे मृत्यु
मूलधार पोष्ट २०७५, ६ माघ आईतवार 429 पटक हेरिएको
काठमाडौँबाट इलाम जाँदै गरेकाे बस शनिवार सर्लाहीमा दुर्घटना भएकाे छ । काठमाडौँबाट इलाम जाँदै गरेकाे ना ५ च ५७५४ नम्बरकाे बस बिग्रिएर रोकी राखेको ठाउँमा राती १ः३० बजे सोही दिसाबाट आएको ट्रकले ठक्कर दिँदा दुर्घटना भएकाे हाे ।
दुर्घटनामा परी बसमा सवार इलाम सुलुवुङका गोविन्द साउदेन र इटहरी १६ की विनीता राईको मृत्यु भएको छ भने ट्रकमा सवार विरजञ्ज नगरपालिका १९ का रहिम मियाँको मृत्यु भएको छ । अहिले बस र ट्रक दुवै प्रहरी नियन्त्रणमा छ । ट्रक सवार घाइते उदयपुर कटाहारीका दीपक अधिकारीको उपचार भइरहेको छ ।
त्यस्तै आफूसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै डा. केसी २५ पुसबाट इलाममा अनसन बसे । त्यसको केही दिनमा डा. केसीविरुद्ध विजय थापालाई खडा गराइयो । उनी पनि इलाम मै अनसन बसे । डा. केसीको समर्थनमा र्‍यालीहरु निस्किए । थापाको समर्थनमा पनि र्‍याली निस्कियो । थापाको अनसन सरकार विरद्ध होइन, डा. केसीविरुद्ध थियो । त्यसैले अमुक-अमुक मेडिकल कलेजहरुको सञ्चालकले उनलाई अनसन बसाएको आशंका थियो । यसैबीचमा चैतन्यप्रकाश मैनाली नामका व्यक्ति झापाको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजको तर्फबाट उनलाई भेट्न इलाम पुगेको खबर आयो । त्यसबारे जिज्ञासा राख्दा बी एण्ड सीका सञ्चालक दुर्गा प्रसाइँले पत्रकारहरुलाई गाली गलौज गर्दै धम्की दिए ।
प्रसाईको रवैयाले थापा कसैको ‘इन्ट्रेस्ट’मा अनसन बसेको आशंकालाई थप बल पुर्‍यायो । स्मरणीय के छ भने चैतन्यप्रकाश मैनाली तिनै हुन्, जो कुनै समय बी एण्ड सी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउनुपर्छ भन्दै आमरण अनसन बसेका थिए । मेडिकल केलज सञ्चालन गर्न चाहनेहरुले साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गरेर सम्बन्धन हत्याउन खोज्नु वा कसैलाई अनसन बसाउनु अस्वभाविक होइन । तर, बिहीबार भद्रपुरमा जे भयो, त्यसले राज्य पनि विजय थापाकै काँध थाप्न लागेको त होइन भन्ने आशंका उब्जाएको डा. केसीका सहयोगीहरु बताउँछन् ।
तिमध्येका एक भन्छन्, ‘अहिले नै धेरै भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौं, तर हिजोको घटनाले विजय थापालाई राज्यले नै सहयोग गरेको आशंका जम्माएको छ ।’ उनका अनुसार, सरकारले देशमा धेरै जना अनसनकारी छन् भन्ने पारेर डा. केसीको सत्याग्रहलाई निस्तेज पार्न चाहेको हुन सक्छ । थापालाई डा. केसी भर्ना गरिएको शिक्षण अस्पतालमै लैजानुले पनि सरकारको नियतमा शंका उब्जाएको छ ।
केसीका एक सहयोगी भन्छन्, ‘डा. केसीसँग सम्वाद गर्ने भन्दा पनि विजय थापाहरुलाई अगाडि सारेर चिकित्सा शिक्षा सुधारको मुद्दालाई विद्रुप बनाउन उद्दत भएको हो कि भन्ने भएको छ ।’